SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Chuvash Cibemba Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Mam Maya Myanmar Ndebele Ndonga Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Wallisian Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Ndaifunga Kuti Ndiri Kunakirwa Neupenyu
Yakataurwa naPawel Pyzara
GORE REKUBEREKWA: 1982
NHOROONDO YOUPENYU: NDAIITA ZVEKURWA, ZVEMADHIRAGI, UYE NDAIDA BASA REPAMUSORO
Ndakaberekerwa mune rimwe guta duku remuPoland, riri pedyo nemuganhu wePoland neGermany. Ndainge ndisina wandainetsana naye nokuti taigara munzvimbo ine mapurazi uye ine masango. Vabereki vangu vaindiratidza rudo uye vaindikurudzira kuti ndive munhu akanaka, ndigone kuchikoro, uye kuti ndizova nebasa repamusoro.
Ndakazotanga kuita misikanzwa pandakaenda kunodzidza zvemutemo kuyunivhesiti iri muguta reWrocław. Sezvo ndainge ndava kure nevabereki vangu, ndakaita shamwari dzakaipa. Ndakanga ndagara ndichifarira bhora, asi panguva iyi ndakanga ndava kurida zvakanyanyisa. Timu yandaifarira yaibva muguta reWarsaw, uye pakupera kwevhiki ndaiitevera kwese kwayainotamba. Pataienda tainwa zvakanyanya, taishandisa madhiragi, uye dzimwe nguva tairwa zvisingaite nevatsigiri vemamwe matimu aitamba neyedu. Ndaiona izvi sezvaiita kuti ndimbokanganwa zvinhu zvinondinetsa, kunyange zvazvo ndaiziva kuti kana ndikasungwa nemapurisa zvaizokanganisa zvidzidzo zvangu zvemutemo.
Ini neshamwari dzangu taifarira kuenda kumabhawa nekumadhindindi. Ikoko taiwanzorwa nevanhu mumigwagwa. Ndakasungwa nemapurisa kakati kuti, asi ndaiwanzowana pekubuda napo kuti ndisapinda munyatwa nekutyora kwandaiita mutemo, dzimwe nguva ndichitombobvisa chiokomuhomwe. Ndaifunga kuti ndainakirwa neupenyu. Kunyange zvakadaro, nechemukati ndaiziva kuti zvandaiita hazvina kunaka. Musi weSvondo wega wega ndaienda kuchechi kuti hana yangu isanyanyondinetsa.
Muna 2004, Zvapupu zvaJehovha zviviri zvakagogodza pasuo rangu, uye ndakabvuma kukurukura navo zveBhaibheri. Pandaidzidza zvakawanda pamusoro pekuti muKristu wechokwadi anofanira kurarama sei, hana yangu yakatanga kunditongesa. Ndaiziva kuti ndaifanira kurega kunwa zvakanyanyisa, kushandisa madhiragi, uye kutamba nevanhu vanoita zvinopesana nezviri muBhaibheri. Ndakaonawo kuti ndaifanira kuchinja, nekuti ndaiva nehasha uye ndaida zvekurwa. Kunyange zvazvo ndaiziva kuti ndaifanira kuchinja, ndakangoramba ndichiita zvakaipa.
Ndakazochinja pfungwa rimwe zuva ari manheru pandakarwisana nevamwe varume 8. Ndinoyeuka ndakarara mumugwagwa ndichirohwa zvibhakera nekukaviwa mumusoro. Ndakafunga kuti ndava kufa, ndikabva ndanamata ndichiti: “Ndiregerereiwo Jehovha, handina kukoshesa zviri muShoko renyu. Kana ndikapona, ndichadzidza Bhaibheri neZvapupu ndochinja upenyu hwangu.” Ndakapona uye izvi zvakandishamisa chaizvo. Ndakabva ndatanga kudzidza Bhaibheri sezvandainge ndavimbisa.
Muna 2006, ndakatamira kuEngland. Ndaida kunotsvaga mari yekuti ndizodzokera kuPoland kuti ndinoita rimwe dhigirii rezvemutemo. Pandairamba ndichidzidza Bhaibheri, pane rugwaro rwakandibata-bata. Muapostora Pauro akanyora kuti: “Zvechokwadi ndinoonawo zvinhu zvose sokurasikirwa kana ndichienzanisa nokukosha kukuru kwokuziva Kristu Jesu Ishe wangu. Ndakabvuma kurasikirwa nezvinhu zvose nokuda kwake uye ndinozviona semarara mazhinji, kuti ndiwane Kristu.” (VaFiripi 3:8) Ndainge ndakangofanana nemuapostora Pauro pakuti naiyewo akanga adzidza zvemutemo, uye aimbovawo munhu aida zvekurwa. (Mabasa 8:3) Asi akazoona kuti paiva nezvimwe zviri nani zvekuita muupenyu: Kushumira Jehovha uye kuita zvose zvaaigona pakutevedzera Jesu. Pandakafungisisa nezvemuenzaniso waPauro, ndakazoona kuti kuva nebasa repamusoro uye kuita zvekurwa hazviite kuti munhu afare. Ndakaona kuti kana Pauro akakwanisa kuchinja, kana neniwo ndinokwanisa. Saka ndakasarudza kugara muEngland uye kusiya zvekuenderera mberi nerimwe dhigirii rezvemutemo.
Pandaiwedzera kudzidza nezvaJehovha, ndaiwedzerawo kuswedera pedyo naye. Ndakabayiwa mwoyo nevimbiso yake yekuti anoregerera vaya vanenge vaine chido chokuchinja. (Mabasa 2:38) Uye pandakafungisisa 1 Johani 4:16 iyo inoti “Mwari rudo,” ndakatanga kunzwisisa kuti sei achivenga kurwisana.
Ndaida kubatana nesangano reZvapupu zvaJehovha rine vanhu vanofara
Ndakafarirawo mararamiro anoita Zvapupu zvaJehovha. Ndakanyatsoona kuti vanoedza kurarama maererano nezvinodzidziswa neBhaibheri. Ndaida kubatana nesangano iri rinofara. Ndakashanda nesimba kuti ndichinje upenyu hwangu, ndokuzobhabhatidzwa kuti ndive mumwe weZvapupu zvaJehovha muna 2008.
Ini naEsther tinowana mufaro wechokwadi pakudzidzisa Bhaibheri vanhu vanotaura chiPolish
Bhaibheri rakaita kuti ndichinje kubva pakuva munhu anozvikudza, anoda zvekurwa, anoshandisa madhiragi, anonwa zvakanyanya, anofarira nhabvu zvakapfurikidza kuenda pakuva mushumiri waMwari anonakidzwa nekudzidzisa vamwe nezveBhaibheri. Kunyange ndichiri kuona bhora, ndakatsunga kuramba ndichikoshesa zvekunamata kupfuura zvekutandara.
Ndakazoroora Esther, mukadzi akanaka anoshumirawo Jehovha. Tinowana mufaro wechokwadi pakudzidzisa Bhaibheri vanhu vanotaura chiPolish, vari kuno nechekuchamhembe kweEngland. Handisati ndambonzwa kugutsikana zvakadai muupenyu hwangu. Ndava nehana yakachena uye ndava kurarama upenyu hunogutsa uye hune chinangwa.
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI November 2015 | Mwari Anoona Sei Hondo?